Jidka Ciise Masiixi Qaabkeen Udiyaarin karnaa? – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on August 21, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Ciise wuxuu ka yimid Galilii wuxuuna yimid webi urdun, yooxaana wuu Maquuriyey (Babtiisay) Ciise (Markoos 1:9; Mataayoos 3:13; Yooxanaa 1:32-34).
Ciise ma u baahnayn inuu toobadkeeno, waayo wax dembi ahba ma lahayn (Cimraaniyada 4:15).Yooxanaa wuxuu Maquuriyey (Babtiisay) Ciise waayo waxay ahayd wax wanaagsan in la sameeyo (Mataayoos3:15). Waxay ahayd qorshaha illaah waxayna ahayd wax wanaagsan si kuwa kale ay u arkaan uguna daydaan.Yooxaanaa wuxuu u imaaday inuu diyaariyo jidka Ciise !!
Tani waxay ahayd qorshaha illaah ee Yoxaanaa iyo sayid Ciiseba!!.
Markii Ciise Biyihii la maquuriyey kor uga soo baxay Yooxaanaa wuxuu arkay saddex waxyaabood oo mucjiso ah:
a) Cirka oo furmay.
B) Ruuxa quduuska ah oo kusoo degaya Ciise Masiixi.
b) Illaah oo samada ka hadlay oo dhahaya,kani waa wiilkayga qaaliga ah! aad ayaana asaga ugu faraxsanahay,Masiixiyiintu waxay aaminsanyihiin Ciise inuusan noqon wiilka illaah markuu dunida joogay-wuxuu ahaa wiilka illaah waqti hore waana mid Rabbaani ah,weliba Ciise wuxuu jiray waqtigii billowga wuuna jiri doonaa waqtiga dhamaadka.
Masiixiyiintu waxay aaminsanyihiin saddex shaqsiyadeed oo hadana hal illaah isku ah:
kuwaasina waxay kala yihiin “Aabaha ,wiilka iyo Ruuxa quduuska ah.
Yooxaanaa wuxuu yiri waxaan arkay Ruuxa quduuska ah oo samada kasoo degaya,Ruuxa quduuska ahuna wuxuu kusoo kor degay Ciise Masiix sida qoolley oo kale,ruuxuna wuxuu ku dhex nagaaday oo ku nastay Ciise.
Yooxaanaa wuxuu yiri anigu xataa magaranayn Ciise midkuu ahaa,
laakiin midkii isoo diray kaas oo ahaa Aabaha inaan dadka biyaha ku maquuriyo (ku babtiiso), ayaa wuxuu igu yiri waxaad arki doontaa Ruuxa quduuska ah oo samada kasoo degaaya oo ku dagaaya nin korkiisa,ninkaasu wuxuu dadka ku maquurin doonaa ama ku babtiisi doonaa, Ruuxa quduuska ah.” Waxaana arkay Ruuxa oo kusoo degaya Ciise,waxaana idiin sheegayaa,in ninkaanu yahay wiilkii illaah (Yooxaana 1:32-34 ).
Farqiga u dhaxeeya Maquurintii ama Babtiiskii lasiiyey Yooxaana iyo Maquurintii lasiiyey Ciise wey kala duwnaayeen:-
1) Yooxaana wuxuu wax ku babtiisay biyo, sida calaamad toobadkeen iyo cafiska dembiga (Markoos1:4).
2) Ciise wuxuu wax ku maquuray biyaha sida calaamad toobadkeen iyo cafiska sida yooxaanaba uu sameeyey wuxuuna u balanqaaday mu,miniinta awooda Ruuxa quduuska ah.(Markoos 1:18; Lukoos 24:49).
Markii yooxaana maqruuriyey amaba uu babtiisay Ciise (Markoos1:19 ) looma baahan in Ciise dembiyadiisa qirto:
. waayo dembi malahayn (Cimraaniyada 4:15)
. wuxuu ahaay oo yahay wiilka illaah (Cimraaniyada1:1)
. Wuxuu ahaa Ruuxa quduuska ah oo kaamil ah (Markoos1:10-11).
Kuwaani waa asal raaca iimaanka masiixiyiinta.
Tan kadib ciise waxaa Ruuxa quduuska ahi u diray si shaydaanku u jarribo ( Mataayoos 4:3-9.).
Posted in All resources, Lectures, Maqal, Qoraal, Waxbaritaanka